Raw Trenbolone Acetate poda Vagadziri & Vanotengesa - Fakita
Raw Trenbolone Acetate powder (10161-34-9)
Raw Trenbolone acetate powder inoonekwa seimwe yezvigadzirwa zvakasimba mumiganhu yayo yekuita, izvo zvinogona kuunza zvigaro zvakawanda. Vamwe vatambi vanoriidza mutongi kana mambo munyika yakafanana yakagadzirira.Raw Trenbolone Acetate powder ine zvimwe zvakasimba zvakasunga zvinhu. Izvi zvinobvumira steroid kuti iwane androgen receptors mumuviri uye inonamatira kune izvo zvikamu.
Raw Trenbolone Acetate powder (10161-34-9) video
Raw Trenbolone Acetate powder (10161-34-9) tsananguro
Raw Trenbolone Acetate powder, inotengeswa pasi pemazita ezita rakadai seFinajet uye Finaplix pakati pevamwe, inonzi anrogen uye anabolic steroid (AAS) mishonga inoshandiswa muzvigadzirwa zvemhuka, kunyanya kuwedzera kubatsirwa kwezvipfuwo kuburikidza nekusimudzira musimba kukura mumombe. Inopiwa nejojo ​​mu musumbu.
Vakatambi uye miviri yakave iri kushandisa Raw Trenbolone Acetate powder semuviri-uye kushanda-kukurudzira mishonga kwemakumi emakore. Kune huwandu hwakawanda hwezvibatsiro semuumbi wemiti kuburikidza uchishandisa Trenbolone Acetate powder seAAS, nokuti inofungidzirwa kuva inenge kashanu inoshanda uye yakasimba kudarika testosterone. Kusiyana ne testosterone, Raw Trenbolone Acetate powder haina kukonzera chero kuchengetedza kwemvura panguva yekuwana musimba mashoma. Izvi zvinobvumira kuti vashandi vemuviri vaoneke vakachena, uye ichi ndicho chikonzero chichinyanya kushandiswa pavanenge vachigadzirira zviitiko zvekukwikwidzana.
Raw Trenbolone Acetate powder (10161-34-9) Specifications
Product Name Raw Trenbolone Acetate powder
Kemikari Name Trenbolone acetate; 10161-34-9; Finaplix; Trenbolone 17-acetate; Component TS; Trenbolone (acetate)
muchiso Name Finajet; Finaplix
CAS Number 10161-34-9
Molecular Wsere 312.4
Monoisotopic Mass 312.173 g / mol
Kunyorera Point 90- 92ºC
Freezing Point Hapana zuva rawanikwa
Biological Half-Life 2 kune mazuva 3
ruvara Yellow crystalline powder
Skukodzera Kusasvibiswa mumvura kana doro, kusungunuka muAcetic acid, ethyl ester
Storage Temperature 0-6 ° C
APane Raw Trenbolone Acetate powder ndeimwe yevana anabolic steroid ine simba ine simba rinokurudzira kukwanisa kunyanya kune vatambi uye vavaki vomuviri. Trenbolone Acetate powder inobudirira kupfuura testosterone kana yakashandiswa zvakanaka uye maererano nezvinorumbidzwa.
Chii chinonzi Raw Trenbolone Acetate powder (10161-34-9)?
Trenbolone acetate powder is an anabolic steroid ine simba kwazvo uye inonzi inonyanya kunakidza vanabolic steroid nemabasa akawanda ekusimbisa vatambi. Iyi ndeimwe yemhando dzakasiyana-siyana vanabolic steroid pamusika uye inogona kupa zvipo zvakasiyana zvakasiyana nedzimwe steroid. Trenbolone Acetate powder inowanikwawo kune dzakawanda dzenhema muanabolic steroid yenyika, asi tinotarisira kuti tichakwanisa kubvisa zvinyorwa izvi uye kuwana ruzivo rwakasimba rwechikamu. Trenbolone Acetate powder inonzi yakarongwa seveterinarian grade anabolic androgenic steroid. Iyo hormone yeTrenbolone iyo yakatanga kusikwa mukati mekupedzisira kwe1960 uye Acetate version yaizotengeswa pasi pemazita mazita Finajet uye Finaject.
Iyo Yakakura Sei Trenbolone Acetate Powder (10161-34-9) mabasa
Raw Trenbolone Acetate powder ine zvimwe zvakasimba zvakasunga zvinhu. Izvi zvinobvumira steroid kuti iwane androgen receptors mumuviri uye inonamatira kune izvo zvikamu. Testosterone ichangoerekana yakabatanidzwa kumagamuchiri, asi tsvakurudzo inoratidza kuti Tren Acetate inoumba hukama huri nani pamwe nemakiti kupfuura testosterone. Izvo zvipiko zvinotakura mashoko kune dzimwe nhengo dzomuviri.
Kana imwe nguva vaparidzi vakura vachizojaira kuchinja mutsva, avo vakagamuchira vachaita kuti muviri uite nenzira dzakasiyana. Kushandisa steroid kunogona kuchinja nzira iyo muviri unoshandisa mapuroteni nemahydrohydrates. Panzvimbo pekutendesa izvo zvishandiso kuva mafuta, muviri unovaka misumbu kubva kune iyo makemikari. Tren Acetate powder inomirawo muviri kuti usashandura kudya kuva mafuta akawanda uye unodzivirira kuchengetedza mvura. Mamwe mhando dzakawanda dze steroid dzinokonzera mitsipa kuti iwane mvura yakawanda, iyo inogona kuita kuti uwedzere kuwanda. Tren Acetate powder inoshanda kupfuura testosterone kana yakashandiswa zvakanaka uye maererano nezvinorayirwa. Kugamuchira kodzero yeTrenbolone Acetate cycle inogona kuva imwe yenhanho huru pane chero upi noupi hunoita kuti hurumende ibudirire kuitira kuti uwane mhinduro dzaunoda nekuchengetedza uye munguva pfupi.
Raw Trenbolone Acetate powder (10161-34-9) Dosage
Trenbolone Acetate powder inowanzoshandiswa pamayero e35-150 mg / zuva, uye zvinowanzoitwa 50-100 mg / zuva. Chirwere che 35 chizhinji chinokodzera chete kana uine hukama hwepamusoro hwehutbolone-mamwe madhara. Apo chitbolone inoshandiswa iyi iri pasi uye inobudirira mupfungwa inoda, imwe injectable anabolic steroid inofanira kuwedzerwa. Masteron isarudzo yakanaka nokuda kwechinangwa ichi. Chimwe, chisarudzo chakasiyana-siyana ndi testosterone.
Kana iri yepamusoro ye150 mg / chimiro, izvi zvinowanzoshandiswa nokuda kwekuwedzera manzwiro emagetsi ekuenzanisa nekuenzanisa ne 100 mg / zuva panzvimbo yekuwedzera hukuru kana kusimba kwesimba, izvo zvatove zvichisimbiswa kana zvakanyanya kuwedzerwa pa 100 mg / zuva.
Vazhinji vashandisi vanoona 50-75 mg / zuva kuti ive yakakosha, uye inopa ruzivo rwakanaka sechikamu chevanabolic steroid stack.
Aya mabhirigiramu akaenzana akaderera zvakanyanya kune injectable anabolic steroid. Chikamu chechikonzero ndechekuti trenbolone inoshamisa zvikuru (inoshanda pamamiriyoni imwe.) Chimwe chikonzero ndechokuti iyo acetate ester isingawanzovhenekeri, iyo yakanyanya kuwanda yehutatu hweTrenbolone Acetate powder molecule ndiyo steroid inoshanda.
Raw Trenbolone Acetate powder (10161-34-9) Kushandisa
Tren Acetate inoita sevakawanda dzimwe vanabolic steroids. Iko kunoita kuti muviri wako uwane kukwanisa kuita mapuroteni uye inobatsira mishonga yako yemisumbu kuchengeta nitrogen yakawanda. Kana muviri wako uchikwanisa kuumba mapuroteni nokukurumidza, uye apo chivako chezvivako izvi (iyo nitrogen) inowanika muhuwandu, unogona kuona kukura kwemasumbu pane imwe nzvimbo yakawanda. Kunze kweizvi, Trenbolone Acetate ichashandawo kukurudzira insulini-yakafanana nekukura, iyo inofanirwa kugadzirisa nekugadzirisa mishonga mumuviri wako wose. Inowedzerawo kuwedzera kwehutano hweropa zvakanyanya; uye nemamwe masero matsvuku eropa, iwe unogona kuwedzera oxygenze mishonga yako uye unovapa nzvimbo yakakura yekukura.
Tenga Trenbolone Acetate powder kubva kuBuasas.com
Raw Trenbolone powder (10161-33-8)
Raw Trenbolone Enanthate powder (10161-35-8)
Raw Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) powder (23454-33-3)
Raw Methyltrienolone powder (965-93-5)